ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » USA မှ Breaking News » လိင်တူချစ်သူယောက်ျားသည်ဖြောင့်မတ်သောအမျိုးသမီးများအတွက်လိင်အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • ယဉျကြေးမှု • စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းအစည်းအဝေး • သတင်း • လူပုဂၢဳိလ္မ်ား • USA မှ Breaking News
ဧပြီလ 21, 2017
Hit New York City production “Sex Tips for Straight Women fromaGay Man” will premiere in Las Vegas မှ စနေနေ့, မေလ 27, 2017 at Paris Las Vegas with stars Kendra wilkinson(“Kendra on Top,” “The Girls Next Door”) and Jai Rodriguez (“Queer Eye for the Straight Guy,” ABC’s “Malibu Country,” Broadway’s “Rent”). Written by Matt Murphy and based on the novel of the same name by Dan Anderson နှင့် Maggie Berman, the show has been acclaimed as “hysterically titillating” by TheaterMania and hailed by Broadway World as “a night of laughter that makes you feel good in all the wrong places.”
တစ် Co-ထုတ်လုပ်မှု Adam Steck’s SPI Entertainment with Matt Murphy နှင့် Shawn Nightingale, “Sex Tips for Straight Women fromaGay Man” is an interactive engagement that takes the motto “practice makes perfect” toawhole new level. As the ultimate adults-only party, the show promises to leave audiences with intimate bedroom insight.
“The success of the show in နယူးယောက်စီးတီး and on tour has exceeded my wildest expectations,” said Murphy. “Working with Kendra and Jai on the Las Vegas မှ premiere is going to be suchablast. I can’t wait to see them on stage together at Paris Las Vegas.”
“My wife and I saw the show for the first time in နယူးယောက်စီးတီး and immediately thought: Las Vegas မှ needs this,” said Steck. “It’s fun, lighthearted, includes crowd interaction, and most importantly, it’sabit naughty.”
Boris ဂျွန်ဆင်: COVID-19 ကိုစောစောစီးစီးအနားယူရန်မ ...
အသစ် AC ဟိုတယ်အတ္တလန်တာလေဆိပ် Gateway မှာ
Lufthansa ကအမျိုးသမီးများနှင့် ...
ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးမှုများ၊ ဒဏ်ရာများနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ...
Naples၊ Marco ကျွန်းနှင့် Everglades CVB အလုပ်အမှုဆောင် ...
Sandals Resorts အမှုဆောင်သဘာပတိအားလူငယ်ခေါင်းဆောင်များအားဆုချီးမြှင့်သည်။
WHO သည် COVID-1 ဆေး ၁ ဘီလီယံလှူဒါန်းရန်လိုသည်။
စိန့်ဟယ်လီနာသည်ဗြိတိန်၊ အာဖရိက၊ COVID-Free ဖြစ်ပြီးယခု ...
ကြီးမားသောဆန္ဒပြမှုများနှင့် COVID များကြောင့်ပါရီတွင်လုံခြုံပါသလား။
ပျက်ကွက်အင်ဂျင်နှင့် Belavia လေယာဉ်အရေးပေါ် ...
MVP ဆိုတာဘာလဲ၊ Hardware Design မှာဘယ်လိုအသုံးချမလဲ
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များသည်ဖူးခက်ညနေခင်းအသက် ၉ နှစ်တွင်အမြန်ဆုံးရောက်ပါလိမ့်မည်
ပွဲများကိုစက်မှုကောင်စီသည် The Code နှင့်ပူးပေါင်းသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းမှာလိင်တူနှစ်သက်တဲ့ခရီးသွားနေရာ ၁၀ ခု ...
SKAL Rome တွင်အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီအသစ်ရှိသည်